PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-09-17 - Izinkinga azixazululwe ngenye indlela
Izinkinga azixazululwe ngenye indlela
Isolezwe ngeSonto - 2017-09-17 - IMIBONO -
ESEBEKIWE ekhaya lakhe lokugcina zashiwo zonke izinkulumo emngcwabeni wakhe, sekushunyayelwe konke enkonzweni yakhe yokugcina, sengathi angaba ngowokugcina uSindiso Magaqa ukuphenduka umhlatshelo kule nkemba elokhu igwaze iphindelela kwaKhongolose.
Baningi abafanisa uKhongolose njengengcanga eqhobozela imidlwane yawo. Akekho owake wacabanga ukuthi kuyoke kufike ilanga elinje, lapho uvalo olukhulu ngongasoconga omunye walaba baholi kungaba omunye ozishaya isifuba ngokuba yilungu lale nhlangano.
Akekho onesiqiniseko ngesizathu sokubulawa kwakhe uMagaqa.
Kodwa zonke izinkomba zokubulawa kwamakhansela ziya zincika odabeni lombango wezikhundla nomdonsiswano ngemali yamathenda efike iphume bese iqhumuzwa umsebenzi ungenziwe.
Kubalulekile ukuthi le nhlangano yenze inhlambuluko, izibuze nokuthi okuyijabulisayo yona ukuba namalungu amaningi kunawo wonke amaqembu na, noma ukuba namalungu aqotho aqonda kangcono izimiso nezinjongo zeqembu. Ukube kugxilwa kulokhu esikubalule kamuva, ngabe ababaningi abathi uma bebuka abanye benyuka ngokwezikhundla eqenjini babone bephelelwa umhlaba bese bevukwa umoya wobulwane.
Ngisho nemboni yamatekisi izama ngawo wonke amandla okuzikhuculula nokugeza igama layo, ngokuqeda umkhuba wokucanasa kwezinkabi kule mboni. Kepha kwaKhongolose ngathi yima lingena ikilasi lokucanasa kwezinkabi. Sengathi izinkinga ezigubuzele leli qembu zingadlula ngaphandle kokuthi kuchitheke elinye igazi. Kumele sifike phela nesikhathi sabathungi betulo lokusoconga abanye ukuthi babuyelwe onembeza babo, kusho ngaphakathi sekwanele manje.
Izinxushunxushu zokuyisana ezinkantolo zizophazamisa okuningi, ngoba nakho lokhu kumangalelana kuyinkomba yokubhimba kwezinto ngaphakathi kakadeni. Noma kubuhlungu kuqaqamba kunje ukubulawa kukaMagaqa, akube yisifundo sokuthi ziningi ezinye izixaxululo ezikhona.
Le nhlangano iya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi inhlakanhlaka kakhulu. Asethembe ukuthi owina ngoDisemba uzosenza ngcono isimo ngoba olunye uqhekeko lubukeka lungase luchithe elinye igazi.